SpeedView Pro 3.1.2 apk | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါ... ခရီးသွားတဲ့အခါ အသုံးဝင်မယ့် SpeedView Pro 3.1.2 apk ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်... GPS စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး မိမိခရီးရဲ့ လက်ရှိသွားနေတဲ့ အမြန်နှုန်း၊ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်း၊ အကွာအဝေးအပြင် အချိန်စသည်တို့ကိုပါ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်... Android OS 2.2 နှင့်အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသေးစိပ်ကို https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesector.speedview.pro ကို Click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Sharebeast, Zippyshare နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်..
SpeedView Pro 3.1.2 APK Free Download Android App. SpeedView is an advanced speedometer application that uses the phone's built-in GPS system to show your current, maximum and average speed, as well as the direction, total distance, and time traveled. Suitable for running, car driving, biking, or hiking.
Improved track recording
Added option to clear the log file
GPX files now contain track segments